Communist China – Min Thayt
• The Rise and Fall of The Communist Party of Burma by Bertil Lintner• ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ နေထွက်ချိန် နှင့် နေဝင်ချိန်• ကျော်ဝင်း (ဘာသာပြန်)• လွင်ဦး စာပေ၊ ၂၀၁၃ ၊ ပထမအကြိမ်။ ဇာတ်အစ ၁၉၃၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၅...
တရုတ်တွေ နီတုန်းလားဆိုတာကို နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ တရုတ်တွေဟာ ရဲရဲတောက်ကွန်မြူနစ်တွေ ဖြစ် နေတုန်းလားဆိုတာကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်တွေဟာ နီခဲ့တယ်။ ရဲခဲ့တယ်။ နီရမယ် ချွန်ရမယ်…. လို့တောင် ဆိုခဲ့ကြသေးတယ်မလား။ နောက်တော့ နည်းနည်း အသွင်ပြောင်းလာတယ်။ နီရင် အလိုလို ချွန်လာ မယ်… လို့တောင် ဆိုခဲ့ကြတယ်။ နောက်ဆုံးတော့… ချွန်စရာ မလိုဘူး…. နီရင်ရပြီ ဆိုတဲ့ အဆင့်တောင်...